"Ary natehiny ny vavako izany, ka hoy izy: "Indro, efa nitehika tamin'ny molotrao io; ka dia afaka ny helokao,
ary voavela ny fahotanao" - Isa. 6:7.
Manomana zavatra ampy ho an'ny vahoakany Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fanomezany ampy avy any an-danitra. Tsy afaka manome toetra masina ny zanany ny ray na reny ety an-tany. Tsy afaka mampita ny toetrany amin'ny zanany izy. Andriamanitra irery ihany no afaka manova antsika. Nanisy fofon'aina ny mpianany i Kristy, ary hoy izy: "Raiso ny Fanahy Masina" - Jao. 20:22. Fanomezana goavana avy any an-danitra izany. Zarain' i Kristy amin'izy ireo amin'ny alalan'ny Fanahy Masina ny fahamasinany. Fenoiny ny heriny izy ireo mba ho afaka mambabo fanahy handray ny filazantsara. Manomboka eo, dia velona amin'ny alalan'ny fahaiza-manao ananan'izy ireo sy miteny amin'ny alalan'ny tenin'izy ireo i Kristy. Hanana tombontsoa hahafantatra izy ireo fa manomboka eo dia iray i Kristy sy izy ireo. Tsy maintsy mankamamy ny fitsipiny sy fehezin'ny Fanahiny izy ireo. Tsy manaraka ny lalany intsony izy ary tsy miteny ny teniny mahazatra azy intsony. Avy amin'ny fo nohamasinina ny teny lazainy, ary avy amin'ny molotra nohamasinina. Tsy mivelona araka ny fiainany feno fitiavan-terra intsony izy ireo, velona ao anatin'izy ireo i Kristy ary miteny amin'ny alalany. Omeny azy ireo ny voninahitra niarahany tamin'ny Rainy, ka ho iray ao amin'Andriamanitra Izy sy izy ireo.
Mpisoronabentsika i Jesosy, mpisolovava antsika eo amin'ny fitsaran'ny lanitra. Tsy ankasitrahana ny toerana manetriketrika izay ijoroantsika eo anatrehany amin'ny maha-mpino antsika. Ilaintsika ny hahazo an-tsaina izany fifandraisana izany ho tombontsoa ho antsika ankehitriny sy mandrakizay. Raha zanany isika dia fehezin'ny rohim-pirahalahiana kristianina, mifankatia tahaka ny nitiavany antsika, iray ao amin'ny fifandraisana masina amin'ireo nodiovina tamin'ny ran'ny Zanak'Ondry. Iray amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra, tsy maintsy tia amin'ny fitiavan-drahalahy isika.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa manana Mpisoronabe, izay mamaky ny lanitra, dia i Jesosy Zanak'Andrimanitra. Tsy niditra tao amin'ny fitoerana masina nataon-tanana i Kristy, fa any an-danitra, hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Noho ny ran'ny tenany dia niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina any an-danitra ho an'ny rehetra Izy, hahazo fanavotana mandrakizay ho antsika. — GCB, Telovolana fahefatra 1899.